Isu-ekaanshaha taageerayaasha kooxda Arsenal iyo kuwa ururka Al-Shabaab/ [Qeybtii 3aad] | ixsaan media
Isu-ekaanshaha taageerayaasha kooxda Arsenal iyo kuwa ururka Al-Shabaab/ [Qeybtii 3aad]
Published on August 20, 2015 by amam · No Comments
Maalin maalmaha ka mid ah sanadkii 2013 aniga iyo nin aan saaxiib nahay, kana mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda Arsenal ayaa waxaa noo yimid wiil kale oo ay markaas iigu horreysay, balse ay saaxibkey is-yaqaaneen, isku kooxna taagerayeen. Xoogaa ayey ka sheekeysteen sida aan loogu dul-qaadan karin in kooxdu ay hoos ugu dhacday. Waxay eedda hoos u-dhaca dusha u saareen tababaraha kooxda Arsenal. Marka ay halkaas mareyso ayaa wiilkii noo yimid waxa uu yiri ” Aniga waxaan mar mar ku fakaraa in lacag aan iska qaadno, ka dibna aan dirno qof taageerayaasheena ka mid ah, ka dibna uu London tago si uu iskugu qarxiyo macalin Arsène Wenger, si uu noo dhaafo” Waa hadalkiisii oo aanan waxba ka tagin.
Mid ka mid ah saaxibadey ayaa ii sheegay in maalin uu goob-joog u ahaa, in mid ka mid ah taageerayaasha Al-Shabaab uu yiri ” Maktabad heblaayo maalin walba waxaa lagu caayaa mujaahidiinta, waxaa fiicnaan lahayd in wiil loo diro ha isku qarxiyee si looga nasto” Tan aniga uma soo joogin laakiin nin aan saaxiib nahay ayaa ii sheegay.
Labadan sheeko ee gaa-gaaban ayaa waxaa ka dhexeeya isu ekaansho xagga qar iska tuurnimada iyo dul qaad la’aanta ah, labaduba waxay doonayaan in meesha laga saaro cid walba oo qodax ku ah horumarka iyo guusha labada kooxood.
QODOBBO MUHIIM AH:
1-Isu ekaanshaha aan ka hadlay waa qaar ka mid ah hab-dhaqanka labada taageere.
2-Dhaqanka aan sheegay macnuhu maaha in qof walba oo labada koox taageera inuu leeyahay.
3-Labada taageere meel walba ayey isaga eg yihiin macnuhu ma aha.
4-Labada kooxood dadka taageera waxaa ku badan da’ yarta.
5-Labada taageere kaliya malaha dhaqankan ee waa lala wadaa.
6-Wax badan oo isu eg waa laga soo qaadan karaa laba ka mid ah oo isu sii eg.
7-Uma jeedo in ay isu eg yihiin Al-Shabaab iyo Arsenal ee labadooda taageero ayaa meelo isaga eg.
8-Meelaha qaar aan la jecleyn in la sheego magaca Al-Shabaab, waxaa loo adeegsadaa Arsenal.
Ugu dambeyntii: Waan filayaa in labada qolo ee aan ka hadley mid walba gaarkeed u dhibsan doonto sida aan isugu ekeysiiyey dhaqannadooda qaar, mid walbana igu karaahsan doonto, balse anigu xumaan iyo wanaag midna kama hadline meelo leysaga eg yahay ayaan diiradda saaray.